Linux Ebooks များ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Linux Ebooks များ
Linux Operating System နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားကြတဲ့သူတွေ ရှိမှာပါ။ ဒီစာအုပ်ကတော့ Linux ကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဖတ်ရှု လေ့လာကြပါ။
ko lin, PoeHapGyi
27-04-2007, 12:26 AM
Re: Teach yourself redhat Linux in24 hours
Originally Posted by ရဲနောင်
ဒီတစ်ခုတော့ တကယ်ကျေးဇူးတင်သွားပြီ ကိုရဲနောင်ရေ .... ကျေးဇူးပဲ နော် မရှိလို့ စာရေးပြီး ကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်ဗျာ ။ Thanks, ရှဲ့ရှဲ့ ။ ကျေးဇူး ။
ပိုစ့်မလုပ်ခင် လင့်ကိုသွားကြည့်တော့ File not found. တဲ့ဗျာ လုပ်ပါအုံး ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ richtt အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုရဲနောင်ရေ.. အချိန်လေးရရင် အဲဒီစာအုပ်လေးပြန်တင်ပေးပါလား.. :((
ကျွန်တော်လည်း file not found တဲ့ဗျာ.. X-( X-( X-(
မောင်မောင်ပူတူး :D mrgreen
ကြာပြီကိုးဗျ ..တင်ထားတာက ..
နော်ကိုရဲနောင်ရယ် ..
စာမေးပွဲဖြေနေရလား ..ဂရုစိုက်ဦးနော် ..
မေတ္တာစိတ်ကိုယ်စီနဲ့သတိရနေကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ဝေးဝေး နီးနီးလေးပါပဲ။ -- ။
24-03-2008, 03:54 AM
ပြန်စာ - Teach yourself redhat Linux in24 hours
Linux Complete Backup and Recovery
Linux cmd quick reference
http://w1.uploadmb.com/dw.php?id=1206254217&/(ebook - PDF) Linux Complete Command Reference.pdf
24-03-2008, 10:19 AM
Sams Teach Yourself Linux in 24 Hours, Second Edition isatutorial aimed at making the Linux beginner more effective and productive users of the fastest-growing operating system today - Linux. This book gives the reader step-by-step instructions on how to: install the operating system, configure their hardware, and effectively use the tools that come with the OpenLinux distribution included on the CD.
Originally Posted by ကိုဇော်
ကျေးဇူးပြုပြီး လင့်လေးတွေ တစ်ချက်လောက် ပြန်ကြည့်ပေးပါလား ခင်ဗျာ ..အလုပ် မလုပ်တော့ဘူး ထင်တယ်ဗျ ..
Last edited by ကမ်းသာယာ; 04-06-2008 at 06:38 AM..
မရှိတော့ဘူး http://rapidshare.de/files/9529615/T...4_Hrs.rar.html ဒီလင့်မှာ
ကျေးဇူးပြူပီး ပြန်တင်ပေးပါလား ... http://hotfile.com/ အဲ့ကနေတင်ပေးရင် ပိုအဆင်ပြေတယ်ဗျ
Last edited by cnt.nfu; 25-08-2010 at 01:22 AM..
Find More Posts by cnt.nfu
25-08-2010, 04:45 PM
ူlinux backup and recovery လုပ်နည်းလေးကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အဲ့ဒီစာအုပ်လေးဖြစ်နိုင်ရင်ပြန်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အကိုဘယ်စာအုပ်ကို လိုချင်တယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မသိဘူး .. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ အထဲကမှ အကိုလိုချင်တဲ့ Linux backup & recovery ကိုကူညီနိုင်မယ်စာအုပ်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. အဆင်ပြေပါစေဗျာ ..
နောက်ပြီး လင်းနစ်ကို ၂၄ ရက်နဲ့ လေ့လာမယ်ဆိုတော့ ဟိဟိ .. တစ်ကယ်တော့ လင်းနစ်ဆိုတာ ဘာဆိုဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အိုအက်စ် တစ်ခုပါ .. သူက ၂၄ ရက်နဲ့လည်း မတတ်နိုင်သလို Client တစ်ခုအနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်သာသာလောက်ကို ကောင်းကောင်လေး ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ် .. Client အနေနဲ့ပြောတာနော် ကျန်တဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သုံးနိုင်လာပါလိမ့်မယ် ..
စိတ်ဝင်တစ်စားနဲသေချာလေ့လာမယ်ဆိုရင် တစ်နေ့တောင် အောင်မြင်မှာပါ
Last edited by sAnDViper; 25-08-2010 at 06:56 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ sAnDViper အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
bonge, kyaukphyu, lu soe, tu tu
27-11-2010, 09:23 PM
ပြန်စာ - Linux Ebooks များ
Linux နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေ ဖိုရမ်မှာ တင်ပေးထားတာ အားနည်းနေလို့ အားဖြည့် ပေါင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ် - ကျွန်တော့်မှာ Linux နဲ့ ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေ ၆ ဂစ်ကျော်ကျော်ရှိတယ် - တစ်နေ့နည်းနည်းနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း စုံအောင်တော့ တင်ပေးသွားမယ် စိတ်ကူးထားပါတယ် - လောလောဆယ်တော့ ပထမပိုင်းပေါ့ -
Sams - Teach Yourself Linux in 24 Hours - 1st Ed 1998.pdf (3.8 MB)
Sams - Teach Yourself Linux in 24 Hours 2nd Edition.pdf (13.7 MB)
osprey_installation_linux.pdf (272 KB)
O'Reilly -  LINUX Network Administration.pdf (8.6 MB)
McGraw.Hill.Osborne.Media.Linux.Administration.A.Beginners.Guide.Fifth.Edition.Sep.2008.eBook-DDU.pdf (10.6 MB)
linux-getting-started.pdf (1 MB)
Linux Complete Command Reference.pdf (10.1 MB)
Hack Proofing Linux.pdf (11.8 MB)
(ebook - English) Advanced Linux Programming.pdf (3.7 MB)
26007521-Free-Geek-Workbook.pdf (3.2 MB)
Getting Started with Ubuntu 10.04_3.pdf (4.6 MB)
linux-userguide-all.pdf (4.5 MB)
mashabletwitterguidebook2009-090803100025-phpapp02.pdf (22.8 MB)
McGraw.Hill.Osborne.Media.How.to.Do.Everything.Ubuntu.Sep.2008.eBook-DDU.pdf (16 MB)
the-linux-guide.pdf (1.9 MB)
Ubuntu Install.pdf (1.2 MB)
ubuntu_user_guide.pdf (507 KB)
ubuntupocketguide-v1-1.pdf (2.1 MB)
Wiley.Ubuntu.Linux.Bible.Jan.2007.pdf (44.5 MB)
w_free01.pdf (19 MB)
A.Practical.Guide.to.Ubuntu.Linux.3rd.Edition.Aug.2010.Prentice.Hall.pdf (12.3 MB)
easiest_linux_guide_ever.pdf (5.5 MB)
excerpts.pdf (287 KB)
ffa-2002-12-13-mod.pdf (1.3 MB)
Grokking-the-GIMP-v1.0.tar.gz (26.9 MB)
Installation_Guide_OOo3.pdf (467 KB)
Kelty-TwoBits.pdf (3.3 MB)
linux_starter_pack.pdf (12.7 MB)
Prentice.Hall.Glitch.The.Hidden.Impact.of.Faulty.Software.Sep.2010.pdf (2.4 MB)
producingoss.pdf (830 KB)
Ubuntu installation guide.pdf (1.9 MB)
Last edited by KznT; 28-11-2010 at 03:34 PM..
hellboy, lu soe, yawnathan
25-01-2011, 06:29 PM
လင်းနစ်သမားတွေ အတွက် Security ပိုင်းဆိုင်ရာကိုေ၇းသားထားတဲ့ စာအုပ်၂အုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..Network Admin ကော System Admin အတွက်ပါ အသုံးဝင်လှတဲ စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်မလို့ လက်ကိုင်ထားသင့်လှပါတယ်ခင်ဗျာ . အောက်မှာ လင့် ၂ ခုကတင်ပေးထားပါတယ် ..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ sAnDViper အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
bonge, g00gle, kyaukphyu, KznT, lu soe
အသင့်တော်ဆုံး Linux OS အား ရွေးချယ်ခြင်း KznT Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ 17 06-06-2013 11:52 AM
Linux အသင်းဝင်တစ်ယောက် အဖြစ်သို့ KznT Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ006-06-2010 12:30 AM